यी खानाहरु खानुहोस् जसले हटाउछ मुटुको धमनीको अबरोध - ज्ञानविज्ञान
यी खानाहरु खानुहोस् जसले हटाउछ मुटुको धमनीको अबरोध
हर्ट ब्लकेजबाट बँच्नका लागि शरीरिक क्रियाकलाप आवश्यक हुन्छ र साथै हाम्रो आहारमा केही विशेष चीज समावेश गर्न पनि आवश्यक हुन्छ ।
यस्ता थुप्रै चीज छन्, जुन सजिलै किचनमा उपलब्ध हुन्छन् । यी चीजको प्रयोग गर्दा हर्ट ब्लकेजको समस्यालाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।
चिकित्सकका अनुसार, यस्ता ८ चीज छन्, जसको प्रयोगले हर्ट ब्लकेजको समस्यालाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । हर्टको इलेक्ट्रिकल सिस्टममा हुने ब्लकेजलाई हर्ट ब्लकेज भनिन्छ ।
यो सिस्टम हर्ट बिट रेट र रिदमले निश्चित गर्छ । हरेक हर्ट बिटको साथ एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जान्छ, जसले माथि देखि तलसम्म सम्पूर्ण शरीरमा रगतको आपूर्ति गर्छ ।
यदि यो इलेक्ट्रिकल सिग्नल स्लो या कुनै कारणले रोकिन्छ भने हर्ट ब्लोकेजको अवस्था उत्पन्न हुन्छ ।
नियमित आफ्नो आहारमा दही समावेश गर्नुहोस् । यसले शरीरमा कोलेस्ट्रोल कम गर्छ । यसबाट हर्ट ब्लोकेजको आशंका कम हुन्छ ।
२- मासको दाल
राती मासको दाल ४-५ चम्मच पानीमा भिजाएर राख्नुहोस् । बिहान यसलाई पिसेर दूधमा मिलाएर पिउनुहोस् । यसमा चीनी पनि मिलाउन सकिन्छ ।
३- बदाम र कालो मरिच
३ बदाम र ४ कालो मरिचको पाउडर बनाउनुहोस् । यसमा थोरै तुलसीको पाउडर मिलाएर नियमित पानीको साथमा पिउनुहोस् ।
४- गाँजर र मह
हप्तामा दुई-तीन पटक गाँजरको जूसमा मह मिलाएर पिउनुहोस् । यसले कोलेस्ट्रोल कम हुन्छ र हर्ट ब्लकेजको आशंका कम हुन्छ ।
लौकीलाई उमाल्नुहोस् । अब यसमा जीरा, बेसार र हरियो धनियाँ मिक्स गरेर खानुहोस् । यसलाई हप्तामा ३-४ पटक सेवन गर्नुहोस् ।
६- दूध र अमला
दिनहुँ एक गिलास दूधमा आधा चम्मच अमला पाउडर घोलेर पिउनुहोस् । यसको सेवनले हर्ट ब्लकेज हुनसक्ने आशंका कम हुन्छ ।
दिनहुँ बिहान खाली पेट लसुनको एक-दुई पोटी निल्नुहोस् । यसमा पाईने एन्टीअक्सीडेन्ट्सले कोलेस्ट्रोल कम गर्छ र हर्ट ब्लकेजको आशंका कम गर्छ ।
८- कागती पानी
कागतीमा प्रयाप्त मात्रामा एन्टीअक्सीडेन्ट्स पाईन्छ । यसले शरीरबाट खराब कोलेस्ट्रोललाई निकाल्न मद्दत गर्छ । यसबाट हर्ट ब्लकेजको आशंका कम हुन्छ ।
मुटु रोग भए नभएको कसरी थाहा पाउने ?
Don't Miss it आलु र सुजीलाई एकैचोटि मुछेर पुरी बनाउन यसो गर्नुहोस्
Up Next खुशी कहाँ खोज्ने त ?
यस्ता छन्, बेथुको सागका फाइदा
रक्त बवासीरः रक्त बवासीर वा मूत्र पिशाबमा रगत आउने समस्या, बेथुको पात पिसेर मिश्री मिलाएर शर्बत बनाएर ३ दिनसम्म लगातार…
रक्तचाप नियन्त्रण गर्न सकिने, केहि घरेलु विधी
– दिनमा चार/पाँच कप ग्रीन टि सेवन गरौं । – मेथी दानालाई पानीमा रातभर भिजाउने । बिहान उठेपछि खाली पेटमा…
विशेष गरी गर्मी मौसममा सूर्यको ताप तथा बाह्य तापक्रमका कारण शरीरमा पसिना आउँछ । पसिनाका कारण छाला भित्र र बाहिर…
यस्ता छन्, छालाका क्यान्सरका केहि लक्षणहरू
बर्थ माक्र्स : जन्मजात रहेका धब्बाहरुमा हुने परिवर्तनले पनि क्यान्सरको संकेत गर्छ । यस्तै, छालामा देखीने अन्य असामान्य परिवर्तनले पनि…
गर्मी मौसममा खानपानमा अलिकता लापरवाहीले पनि बिरामी पर्ने सम्भावना हुन्छ । जाडो मौसमको तुलनामा गर्मीमा पाचन शक्ति कमजोर हुन्छ ।…